भाटभटेनी मन्दिर परिसरमा २ करोडको सत्तल निर्माण हुने | Hitkhabar
नबिल बैंकको व्यवसायिक कर्जा अब अनलाइन बाटै !
एमालेमा अल्पकालीन युद्धविरामको संकेत
टोकला मसला चिया अब नयाँ प्याकमा
माधव नेपाललाई बराबरी अध्यक्ष दिने सम्भावना शून्य : रघुवीर महासेठ
कालिकोट अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट जडान
भाटभटेनी मन्दिर परिसरमा २ करोडको सत्तल निर्माण हुने
June 29, 2020 June 29, 2020 Hitkhabar0Comments
असार १५, २०७७ । भाटभटेनी ग्रुपले नक्सालस्थित भाटभटेनी मन्दिर परिसरमा २ करोड लागतमा सत्तल निर्माण गर्ने भएको छ ।
भाटभटेनीका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक मीनबहादुर गुरुङले भाटभटेनी माताको मन्दिर परिसरमा स्वर्गीय बुबा बृषबहादुर गुरुङ र आमा धनमाया गुरुङको स्मृतिमा उक्त भवन निर्माण गरिन लागेको जानकारी दिए ।
उक्त भवनको शिलान्यास उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले गरेका छन् । कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै मन्त्री पोखरेलले व्यवसायी गुरुङको प्रशंसा गरेका थिए ।
उनले भने, “मीनबहादुरजी धनमात्रै होइन मन पनि भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ । हामीले मीनबहादुरजीलाई के पाएका छौं भने धन र मन दुवै भएको व्यक्तिका रुपमा । हामीले त्यसरी चिन्छौं । उहाँजस्तै निजी क्षेत्रमा क्रियाशील धेरैजना हुनुहुन्छ । उहाँलाई अनुसरण गर्दै उहाँहरु पनि अघि बढ्नुपर्छ । लगनशील भएर काम गरिरह्यो भने प्रगति गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण उहाँले दिनुभएको छ ।”
उनले सरकारले व्यवसायीलाई सहजीकरण गरिदिने बताउँदै भने, “हाम्रा पुर्खाहरुले निर्माण गरेको चिजहरुलाई नष्ट हुनबाट हामीले नै बचाउनुपर्छ । हाम्रा पुर्खाहरुले धेरै कुरा निर्माण गरे । हाम्रा कारणले नष्ट हुँदैछन् । तर मीनबहादुरजीले त्यसको निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ । सत्तलमा विगतमाजस्तो कोही यात्रुहरु आएर नबसे पनि यसले संकेतको काम गर्छ । दृष्टान्तको रुपमा यो सत्तल रहन्छ । हाम्रा पुराना चिजहरुको संरक्षण हामी आफैँले नै निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ ।”
सम्बोधनमा उनले कोरोनासँग भाग्ने नभइ लड्ने बताए । “कोरोनासँग भाग्ने होइन लड्ने हो । यो आयो भनेर त्रसित भएर भाग्यौं भने कहाँ जाने ? आज हामी भागौंला भोलि भोकमरीबाट मर्ने अवस्था आयो भने के गर्ने ? हामीले हाम्रो आर्थिक गतिविधि बढाउनैपर्छ । कोरोनासँग लड्नु व्यक्तिव्यक्तिको जिम्मेवारी हो । हामी बचेर देश र समाजलाई बचाउने हो ।”
कार्यक्रममा प्रदेश सांसद नारायण सिलवालले पनि गुरुङले गरेको योगदानको चर्चा गर्दै प्रसंशा गरेका थिए ।
उक्त वडाका अध्यक्ष रमेश डंगोलले पनि भाटभटेनी मन्दिरमा सत्तल निर्माण गरिनु राम्रो काम भएको बताएका थिए ।
उक्त सत्तल भाटभटेनी ग्रुपका अध्यक्ष मीनबहादुर गुरुङ र भाइ पहल गुरुङले निर्माण गर्न लागेका हुन् ।
“भाटभटेनी मन्दिरकै नामबाट हामीले सुपरमार्केट्स खोल्यौं,” उनले भने, “अहिले देशका विभिन्न स्थामा भाटभटेनी खुलेका छन् । यहाँको मन्दिरमा हामीले पहिलेदेखि नै संरक्षण गर्दै आएका थियौं । अहिले यसको आडैमा नयाँ भवन बनाउन लागिएको हो ।”
सोमबार नयाँ भवन निर्माणका लागि भूमि पुजन गरिएको छ ।
“आज हामीले भूमि पुजन गरेका हौं,” उनले भने, “यस मन्दिरको संरक्षण गर्ने दायित्व पनि हाम्रै हो । त्यसैले यहाँ भवन निर्माणको काम थालिएको हो ।”
काठमाडौंमा बाँच्न र भविष्य सुनिश्चित गर्नका लागि आफूले सुरु गरेको व्यवसाय अहिले यहाँसम्म विस्तार भएको अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक गुरुङले बताएका थिए ।
“अहिले हामीसँग सात हजार भाइबहिनी आवद्ध हुनुहुन्छ । निर्माणका लागि १५ सय व्यक्तिहरु आवद्ध हुनुहुन्छ । ठेक्कापट्टामा नगइ इनहाउस गर्ने गरेका छौं,” उनले भने, “यहाँसम्म आउनुको पछाडि भाटभटेनी माताको कृपा हो । हामीले यहाँ चारतलाको सत्तल बनाउन लागेका थियौं तर केही व्यक्तिहरुको सुझावका आधारमा दुईतला बनाउन लागेका हौं ।”
← कोरोना भाइरस ७७ वटै जिल्लामा फैलियो
संघीय निजामती सेवा गठन विद्येयक सच्याउन माग, आजबाट आन्दोलन सुरु →
सरकार विरुद्ध सशक्त आन्दोलन गर्नुपर्ने आवश्कत्ता: गजुरेल
July 19, 2019 Hitkhabar 0
मधेश आन्दोलनका घाइतेलाई आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने
June 25, 2018 Hitkhabar 0
कानून निर्माणमा सजग र सिर्जनशील हुन सभामुखको निर्देशन
June 6, 2018 Hitkhabar 0
July 27, 2021 Hitkhabar 0
साउन १२, २०७८ । नबिल बैंकले ऋण कर्जाको लागि अनलाइन बाटै आवेदन गर्न मिल्ने व्यवस्था सुचारु गरेको छ । ग्राहकले बैंकको
July 26, 2021 Hitkhabar 0
July 24, 2021 Hitkhabar 0
विपद न्युनिकरणका लागि डिजिटल प्रविधिको प्रयोगमा विज्ञहरुको जोड
July 4, 2021 Hitkhabar 0
‘प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना नभए ठूलो संकट आउन सक्छ’
June 30, 2021 Hitkhabar 0
एमालेको केन्द्रीय कमिटी ब्युँतने
नबिल बैंकद्वारा “नबिल दिगो बैंकिङ्ग” को उद्घोष्
June 29, 2021 Hitkhabar 0
मन्त्री श्रेष्ठबाट छुवाछुत तथा भेदभाव संस्थागत गर्न खोजिनु निन्दनीय : वाइसियल नेपाल
June 26, 2021 Hitkhabar 0
‘आइसिटी अवार्ड ’ छैटौं संस्करणको अनलाइन नोमिनेशन शुरू
June 22, 2021 Hitkhabar 0
पाँच पूर्वप्रधानमन्त्रीको विज्ञप्तिको राजनीतिक र कुटनीतिक सन्देश के ?
June 14, 2021 Hitkhabar 0
सर्वोच्चको आदेशले नेपाली नागरिकलाई आफ्नै देशमा शरणार्थी बनाउने नेता साहको ठहर
June 11, 2021 Hitkhabar 0
स्वास्थ्यमन्त्री तामाङद्धारा मातातीर्थ सामूदायिक अस्पतालमा जडित अक्सिजन प्लान्टको उद्घाटन
June 9, 2021 Hitkhabar 0
तामाङ गीत ‘ताङ्ला ङाला चु सेम’ म्युजिक भिडियो सार्वजानिक
June 5, 2021 Hitkhabar 0